Ukunxiba umnqamlezo - Ukunxibelelana
Kwilizwe lanamhlanje eliqukayo kunye netekhnoloji eyonyuselweyo, amadoda anokuthenga iimpahla zabasetyhini kwiindawo ezininzi kubandakanya ubumfihlo bamakhaya abo. Namhlanje zininzi iivenkile ezizodwa ezibonelela ngesinxibo-sesinxibo sabasetyhini kubungakanani bamadoda.
Kuphi ukuthenga iimpahla zokunxiba ezinqamlezileyo
Ezi ndawo zibonelela kwimarike yokunxiba emnqamlezweni kwaye zithwala umgca opheleleyo weengubo kunye nezinye izinto ukuze wenze uninzi lwamava onxibo ababhinqileyo.
Ukunxiba umnqamlezo -Ivenkile ye-Intanethi egxile ekunxibeni umnqamlezo Banemveliso ezininzi ezikhoyo kubandakanya: iifom zencindi yesilicone, isinxibo sefantasy, isinxibo semihla ngemihla kunye neehosi.
Isinxibo sobuchule kwigalari yamadoda
Ikhowudi yokunxiba yeSmart Casual
Ukunxiba umnqamlezo eMelika -Le ndawo inamacandelo aliqela kuzo zonke iimfuno zakho zokunxiba. Banamacandelo ekujoliswe kuwo iimpahla zeklabhu, abathanda isikhumba, izinxibo kunye nezinto ezenziwe ngokwesiko ukuqinisekisa ukulingana okufanelekileyo.
Inkosazana yedragi -Kuba le ndawo ikakhulu ijolise ekumkanikeni ookumkanikazi, unokulindela ukufumana isinxibo esikhazimla ngakumbi kunezinye iivenkile ezikwi-Intanethi. Iingubo ezigcweleyo ngokuhlwa, iiwigi, izithambiso kunye nobucwebe linani elikhulu lempahla.
X Ukunxiba Ngelixa le ndawo yokuthenga inezinto ezimbalwa zokunxiba, eyona nto kugxilwe kuyo kukunxiba iimpahla zangaphantsi, izixhobo kunye neempahla.
Ivenkile yeBreastForm -Ivenkile ekwi-Intanethi egxile ekugqibezeleni ukujonga okupheleleyo okunqamlezayo. Apha uya kufumana iipleyiti zesifuba, iingono zeenkohliso, iimpahla zomzimba, isinxibo semihla ngemihla nezihlangu.
Oko Uza Kufumana
Iivenkile ezijolise ekunxibeni iimpahla zokunxiba zihlala zithwala ezi zinto zilandelayo:
Iziseko zomzimba : Ezi zinokuba ngamabhanti okanye iimpahla zangaphantsi zebhanti. Zibalulekile ekubunjweni nasekugudiseni inani eliyindoda labafazi ngakumbi. Iipaneli ezinamaphaphu zingenza amagophe kunye nokunciphisa amalungu e-anatomy eyindoda enokususa kumava obufazi.
I-Pantyhose Iinethi zokuloba iintlanzi, isitokhwe esiphakamileyo samathanga kunye nokunye kunokufumaneka kulowo unxibayo onxibayo ofuna iinylon ezingalinganiyo kuphela, kodwa ezibonakala zintle kakhulu.
IiWigs : Unokuziguqula ube-blonde entle ngolunye usuku kwaye emva koko ube nebhulukhwe ephucukileyo elandelayo. Abalingisi ababhinqileyo bahlala benokujikeleza kweewigi kuba babonisa abalinganiswa abahlukeneyo.
Iingubo : Banikezela ngeempahla ezinqamlezileyo iimpahla ezinxiba iimilo zamadoda kunye neelokhwe ukusuka ku-flirty kunye nokungaqhelekanga ukuya kwizitayile ezintsonkothileyo ezibonakala eqongeni.
Izihlangu : Amadoda anokuthenga izihlangu zobufazi eziya kulungela iinyawo zazo ezinkulu kubathengisi bezambatho ezinqamlezileyo. Iimpompo, iibhutsi, ii-stilettos, iimbadada kunye neeflethi ezintle zohlobo lwe-ballet zihlala zifumaneka ngobukhulu ukuya kuthi ga kwi-17.
Kukho izinto ezithile zokunxiba ezinqamlezileyo ezingafunekiyo ngokulula kwiivenkile zesebe lasekuhlaleni. Ezinye kulula ukuzifumana, kodwa kuba ziyafumaneka kwicandelo labasetyhini kwiivenkile, zikulungele ukulingana nabasetyhini. Ngelixa amanye amadoda anxiba umnqamlezo emancinci kwaye enebhonasi encinci, abanye banomzimba onobungqingili kwaye abalingani kwiingubo ezilingana nabasetyhini.
Eyona nto intle ngokunxiba umnqamlezo ngokunxiba iimpahla ezithile kukuba awunakukhathazeka ukuba iyahambelana na nesakhelo ngokufanelekileyo. Zonke iimpahla, iimpahla zangaphantsi kunye nokusondeza abantu kuyilelwe ukulingana isakhelo sendoda. Nangona kunjalo, ukuba awuqinisekanga malunga nobukhulu bakho kwimpahla yokunxiba emnqamlezweni, yenza nje imilinganiselo yakho ithathwe kwaye uthumele nge-imeyile umthengisi ngaphambi kokuthenga ukuze uqiniseke ukuba ulungile.
Ubucala okanye uLuntu
Amanye amadoda anqumla ukunxiba esidlangalaleni, kwimiboniso yokulinganisa yabasetyhini okanye ngenxa yokuba baziva bekhululekile ngakumbi kwimpahla yabasetyhini; abanye banxiba iimpahla zobufazi ngasese. Kubo bonke abanxibe umnqamlezo, nangona kunjalo, iimpahla kunye nezinto zoncedo zinokufundwa kwaye zithengwe kwindlu yakho.
Iiwigs Ne Ihairpieces Ukulawula Your Credit Ukufa Kwinkcubeko Ngaphandle Kwehlabathi Iliso Makeup Techniques Amantombazana Akuqhelekileyo Clothing
umyalezo wokuvalelisa kugxa wakho oshiya inkampani
Amagama amantombazana amantombazana aqala ngo-j ahlukile
indlela yokuthatha imifanekiso yakho
eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nomhlophe china igama lephethini
Ifenitshala yehotele esetyenzisiweyo iyathengiswa kufutshane nam
indlela yokufumana amabala amanzi ngomthi